မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VI | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VI
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VI
Posted by Kyaemon on May 25, 2016 in Business & Economics, Education, Think Different |3comments
မမှန်ပါ၊ အလှမ်းခပ်ဝေးဝေး မှာပါ
နှစ်ပေါင်း ၂၁၆ အတွင်းမှာ
မိုင် ၆၂ မှ ၁၃၄ ထိ ခပ်ဝေး ဝေး မှာ ၂ ကြိမ်ပါဘဲ
ဖြစ်ခဲ့သလား သို့တည်းမဟုတ် ဖြစ်နိုင်မလားပါ
အဲဒီ နှစ်ကြိမ် ကလဲ ရစ်တာ ၇.ဝ နဲ့ ၇.၆ ဆို
တော့ အကြီးအကျယ် မဟုတ်ပါ၊
ရစ်တာ ၈.ဝ ရစ်တာ ၉ .ဝ လိုဖြစ်တာ
တဝှိုက် အကြီးအကျယ် သေကြေပျက်စီးနိုင်တယ်၊
အစကထဲ ယူဆတာ က ရေနဲ့ငလျင်ကျောတွေထိတွေ့
လို့ငလျင်ကို ဖြစ် စေတယ်လို့ပြောတာ၊
ဒီရေတွေ က ငလျင်ကျော နဲ့မှ မထိတွေ့နိုင် တော့
ကျန်တာတွေလဲ မ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ၊
တောင်တန်းက မ ကာဆီး ဘူးလို့ဆိုကြဆို့၊
၆၂ မိုင်ကျော် အလှမ်းဝေးတဲ့ ငလျင်ကျော ဆီကို
ရောက်ရင်လဲ သိုလှောင်ရေ အသွင်နဲ့အမြဲတစေ
ရေတွေနဲ့ငလျင်ကျော ကြာရှည် ထိတွေ့ရင်
သက်သေလဲ မ ထူထောင်
ရေကာတာ အသင်းကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် အရ
“အနှစ် တစ်သောင်း မှာ တ ကြိမ်” ဆိုတဲ့
စံချိန်စံညွှန်း အတိုင်း ပုံစံရေးစွဲ ထား ရင်
ငလျင်ဒဏ်မှ လုံခြုံ ကာမိ တယ်လို့ယူဆနိုင်တယ်
Once inamillenia ဆိုပြီး နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ဝ မှာ
တ ကြိမ် မမျှော်လင့်တဲ့ ငလျင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်
ရေကာတာ ကျိုးသွားမလား တဦးက ဆွေးနွေး၊
အဲဒီငလျင်က ရစ်တာ ၁ဝ ကိုဆိုလိုဟန်တူ တယ်၊
ဒီမေးခွန်းကိုအောက်ပါ Website ဝဒ်စိုက် က အဖြေများ ရနိုင်တယ်
Once inamillennia means once inathousand years.
An earthquake that hits once inathousand years is the
M 10 (see bottom line of picture)
ဒီရစ်တာ ၁ဝ ငလျင်က စာတွေ့အရဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊
စွမ်းအား ထုတ်လွှတ် တာက
များလွန်းလို့ကမ႓ာ က တောင် အက်ကွဲသွားနိုင်၊
The idea ofa“Mega-Quake” – an earthquake of magnitude 10 or larger – while theoretically possible—is very highly unlikely. Earthquake magnitude is based in part on the length of faults — the longer the fault, the larger the earthquake. The simple truth is that there are no known faults capable of generatingamagnitude 10 or larger “mega-quake.”
Nine out of the ten largest earthquakes to occur in the last century were subduction zone events. This includes the 1960 Great Chilean Earthquake, which at M 9.5 was the largest earthquake ever recorded, the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami, and the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami. (source)
Where are magnitude 10 earthquakes the most likely to occur?
Map of Subduction Zones Worldwide Map of Subduction Zones Worldwide
Subduction ဇုံ မြေထုကြီး ၂ခု ရင်ဆိုင်ပြီး၊ဇုံတဇုံ က နောက်ဇုံတဇုံ
အောက်ထဲ ငုတ်လျှိုးဝင်ရလို့ စွမ်းအားတော်တော်ပြင်း
ဂျပန် ပလိတ် ေြမြထုအချပ်ပြားကြီး နဲ့ရုရှားပလိတ် ေြမြထုအချပ်ပြားကြီး
တို့က တပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်တိုးဝင်ပေါက်ကွဲမှ ဒီလိုဖြစ်နိုင်၊
It’s definitely possible, though not very likely as mentioned above. An unusually long subduction zone, like the Peru-Chile Trench, Aleutian Trench, or Japan-Kamchatka Trench would have to rupture in its entirety to trigger one. In other words, it would have to beaquake that hits Russia and Japan at the same time, oraquake that hits Colombia, Ecuador, Peru, and Chile all at the same time, etc.
Best Answer: The idea ofa“Mega-Quake” – an earthquake of magnitude 10 or larger – while theoretically possible—is very highly unlikely. Earthquake magnitude is based in part on the length of faults — the longer the fault, the larger the earthquake. The simple truth is that there are no known faults capable of generatingamagnitude 10 or larger “mega-quake…..
Subduction ဇုံးတွေ ရှည်လဲရှည် ထူလဲထူထပ်ရမယ်၊ ဒါမှစွမ်းအားတွေ သိုလှောင်နိုင်၊ရမယ်၊
…..You need to have an area where sufficient energy can be stored, thenarupture surface over which to release the energy, and finally, the ability to release it all inavery short time. Those circumstances are pretty much topped out at all of the subduction zones (the only place it could occur) that could make it happen. So anything approachinga10 is very unrealistic, and *above*a10 is basically impossible, as far asanormal earthquake would go.
မြန်မာပြည်မှာ ရစ်တာ ၈ ဆို တဲ့ငလျင် တောင် မဖြစ်စဘူး၊
သူ့ထက်၁ဝ ဆ ကြီးတဲ့ ရစ်တာ ၉ က ဝေလာဝေး
ရစ်တာ ၈ ရဲ့အဆ တရာ ရစ်တာ ၁ဝ က ပိုပြီးတော့ မဖြစ်နိုင်
ဂျပန် ဘက်က မီးဝိုင်းကြီး ပြတ်ရွေ့လိုရှည်လျား
ကချင်မြောက်ပိုင်း ရောက်ရင် မြင်းအမြီးလို
ရစ်တာ ကြီး ၁ဝ မပြောနဲ့ရစ်တာ အလယ်
အလတ် တောင် ခပ်ရှားရှားပါ၊
အပိုင်းပိုင်း အမျဉ်မျဉ်ဖြစ်ရင် ပေါက်ကွဲထုတ်လွှတ်
ပြီးတော့ စစ်ကိုင်းငလျင်ကျော က ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တိုးငုတ်လျှိုး ဝင်
တဲ့ Subduction မျိုးမဟုတ်ဘဲ ဘေးပွတ်ရှပ်ထွက်သွားတဲ့ side slip
ဘုန်းကြီးတွေပင့်ပြီး ပရိတ်တွေရွတ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် တောင်စောင့်နတ်၊
တောင်ပြုံးညီနောင်၊ဦးရှင်ကြီး၊ ရွှေ ညောင်ပင်နတ် တို့ကို သွားပူဇော် ဘို့ဘဲ
Myitsone and in fact Kachin area has only “horse tails” splintered thin fault lines. Meaning no long subduction layers here for an M 10 to happen. Need to store enormous energy inalong subduction layer and released inashort time.
Subduction pic below:
ပလိတ်၂ချပ် ထိပ်တိုက်တိုးပြီးတချပ်ကငုတ်လျှိုးပြီးဝင် Subduction ပုံ
Tectonic ပလိတ် ပြားချပ်တွေ
ဂျပန် အင်ဒိုနီးရှား ကိုရီးယား တဝှိုက် က အပြာရောင် တွေက Subduction zones တွေ ဖြစ်တယ်၊
မြန်မာပြည် ကအစိမ်းနုရောင် က စစ်ကိုင်းငလျင်ကျော Subduction zone မဟုတ်၊မတူပါ
ဘေးရှပ် ဘေးချော်Side Slip zone ကမပြင်းထန်
မီးတောင်တွေ နဲ ဂျပန်နား က့မီးဝိုင်းစက်ကွင်း
ဂျပန် အင်ဒိုနီးရှား ကိုရီးယား တဝှိုက် က အနီရောင် တွေက Subduction zones တွေ ဖြစ်တယ်၊
မြန်မာပြည် က စစ်ကိုင်းငလျင်ကျော လိမ္မော်ရောင်က Subduction zone မဟုတ်၊မတူပါ
ဘေးရှပ် ဘေးချော်Side Slip zone က မပြင်းထန်
ကြောင့် ဧရာဝတီ မြစ်ရေခမ်းခြောက်
မေးသူက ရေကာတာဆိုတာ ရေသိုလှောင်ဘို့ဆည်
ကြီး ရေထွက်ပေါက်မရှိတဲ့ရေချိုးကန် လိုဘဲ မြင်ပုံရတယ်၊
ဒါမှမဟုတ် ရေအရမ်းနဲသွားပြီးသောင်တွေတင် သင်္ဘော
ါ၊ဧရာဝတီ မြစ်ရဲ့အလျားက ၁၃၄၈ မိုင်
ရေစီးဆင်းထုတ်လွှတ်နှုန်း က တစက္ကန့် ဆိုရင် ၄၅၉,၁၀ဝ ကုဗ ပေ
ရေ ထုထည်ပမာဏက ၁၅၉,၇၃၄ စတရန်းမိုင်
– average 13,000 m3/s (459,091 cu ft/s)
– max 32,600 m3/s (1,151,258 cu ft/s)
– min 2,300 m3/s (81,224 cu ft/s)
ပြီးတော့မြစ်ဆုံ တဝိုက် အကျယ်အဝန်းနဲ့ယှဉ်ကြည့်ပါ၊
မြစ်ဆုံအ တွက်ရေသိုလှောင်မှာ က ၁၇၃ စတုရန်းမိုင်
ရှိမယ် လို့လဲပြော တယ်
ဧရာဝတီ ရဲထုထယ် က ၁၅၉,၇၃၄ စတုရန်း မိုင်
ဧရာဝတီ ကရေတွေကိုမြစ်ဆုံရေကာတာမှာ ထဲ့လို့ လဲ ဝင် မဆန့်ပါ
အမိ ဧရာဝတီ ကိုသတ်နေတယ်ဆိုဟန်နဲ့အမိဧရာဝတီ ကိုကယ်တင်
ကြပါ ဆိုပြီးလိုက် ကြွေးကြော်လှုံ့ဆော် တာကို ယုံလွယ်သူတွေလဲမနဲပါ
ထန်းသီးကြွေကျလို့ ယုန်ကလေး က ကမ႓ာကြီးပျက်ပြီဆိုပြီးအော်ဟစ်
တာနဲ့တော တိရစ္စာန်တွေ ထွက်ပြေးကြသလိုပါ၊
အနောက်နိုင်ငံသင်တန်းတက်ပြီး အမိ ဧရာဝတီကိုကယ်ကြပါ လိုက်လုပ်သူကို
အနောက်နိုင်ငံ အဖွဲ့တဖွဲ့ကတောင် ဆုတော်ငွေ ချီးမြှင့်လိုက်သေးတယ်မဟုတ်ပါလော၊
လိုတာကမြစ်ရဲ့ ၅ % အလွန်ဆုံးဘဲလို့ထင်ရတယ်၊
သေချာအောင် ဆိုင်ရာ ကိုမေးနိုင်တယ်၊
အမေရိကန်မှာဆို မြစ်ရေရဲ့ ၁ရ % လောက်ရေကာတာ
အဲဒီလို ၅ % မြစ်ရေယူသုံး တဲ့အတွက် ဧရာဝတီ
မြစ်က မ ခမ်းခြောက် နိုင် ၉၅ %ကျန် ရှိသေးမှာပါ၊
အမိ ဧရာဝတီ ကိုအသေသတ်နေတယ် ဆိုပြီးထ အော်တဲ့
သူတွေ နဲ့ယုံလွယ်သူတွေက ခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါအုံး၊
စီပီအိုင် ဥက္ကဌ ရှင်းလင်းချက်မှာ ရေကြီးချိန်မှာ သုံး % လှောင်
ပြီး၊နွေရာသီကျတော့ ရေ ၁၆ % လွှတ်မှာ၊
ဆိုတော့ ရေလဲ မခမ်းခြောက် သောင်တွေလဲမတင် အားလုံး
ရေဘေးကိုလဲ ထိန်းပေး တယ်၊၊
မျှ ကြည့်ဘို့လို၊ ရေကာတာကြီးမှ အရာရောက်မယ်ဆိုတာပြောဘို့မလိုပါ၊
ဒါးသွားrနဲ့တဆက်ထဲဖြစ်တဲ့ တာဘိုင် အတန်က ဒါးသွားတွေနဲ့
အဲဒီအားကို စက်ရုံ နဲ့အိမ်တွေမှာသုံးနိုင်ရန်ဓာဟ်ကြိုးနဲ့သွယ်ပို့၊
စီးဆင်းမှဒါးသွားတွေကို တွန်းအားရှိလာတယ်ရေတွေကိုအသေ ပိတ်လို့မရ၊
အောင် လုပ်ဘို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ကမ မှန်ကန်ပါ၊
(ရေနံ မီးသွေး လိုကုန်ခမ်းတာ မ ဟုတ် )
ရေအားက ကုန်ခမ်း ပျောက်ကွယ်မသွား ၊
အပန်းဖြေလုပ်ငန်း တို့မှာလဲ ကောင်း
တမိနစ် ရဲ့လည်ပတ်နှုန်းအရှိန် ၃၀ဝ မှ ၄၀ဝ ထိ
သံမဏိစပ် ပစ္စည်းနဲ့လုပ်ဘို့မလို၊အထူး ထိန်းသိမ်း
အမှန်မှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒီပြသနာရှိပြီးသားပါ၊
ရေကြီးချိန် ၃ % လွှတ်ပြီး နွေရာသီမှာ၁၆ %ရေလွှတ်မှာ
ဘာဘဲပြောပြော အောက်ပါ ပုံတွေနဲ့သတင်း တွေကိုကြည့်ပါ၊
၂၀၁၃ ကထဲက တရုပ်ပြည်ကနေ သောင်ရှင်းသင်္ဘော၁၉ စီး အပြင်အကူသင်္ဘော တွေ
ဧရာဝတီ လန်းဆန်းနုပျို သက်ဝင်လှုပ်ရှား ရွှင်လန်းကျန်းမာ အောင် ဝိုင်းဝန်း
(သံလွင်မြစ် ဘက်မှာလဲ ထို့အတူကူညီနေတယ်)
The Department of Water Resources and Improvement of River Systems has received 19 watercraft fromaChinese company that it will use to dredge Myanmar’s rivers.
China National Aero-Technology Import & Export Corporation or CATIC handed overatotal of 19 dredgers and supporting vessels to Myanmar at the commissioning ceremony of dredgers and supporting vessels held at Nanthida Jetty of Yangon on Saturday, 14 September
The ceremony was attended by U Nyan Htun Aung, Union Minister for Transport and Yang Houlan, Chinese ambassador to Myanmar.
သောင်တင်မက ကျောက်တွေကိုပါဖြတ်တောက်ဖြိုခွဲ နိုင်တဲ့ဒါးသွားတွေတပ်ဆင်ထား၊
ကားတွေ ရထားတွေ မှောက်ရင်လမ်းတွေပိတ်ဆို့သလိုသင်္ဘောမြှုပ်လို့ရေကြောင်း
(ပေါချောင်ကောင်းလို့အိန္ဒိယ နဲ့ဘင်ဂလာဒေစ်တို့ကလဲ တရုပ်ဆီက ဝယ်တယ်၊သင်္ဘော
ခုတော့ အကြွေးမှတ်ထားပေးဘာ အွီးမှုန်
ဒါပေမဲ့ စာရေးတဲ့သူက ဒေါသသံ နဲနဲပါနေသလိုပါဘဲ
ဧရာဝတီ မြစ်ထဲက ရေတွေကို စနစ်တကျ အသုံးချနိုင်ရင်